RASMI: Mario Mandzukic oo qandaraaska u kordhiyey kooxdiisa Juventus – Gool FM
“Waxaan sameyn doonaa wax walba si aan ugu soo gabagabeeyo xirfadeyda garoonka Stamford Bridge.” – Xiddig hore Chelsea ah
RASMI: Mario Mandzukic oo qandaraaska u kordhiyey kooxdiisa Juventus
Haaruun April 4, 2019
(Turin) 04 Abriil 2019. Kooxda kubadda cagta Juventus ayaa ku dhawaaqday in weeraryahankeeda Mario Mandzukic uu heshiiska u kodhiyey.
Mario Mandzukic ayaa qadaraaska cusub ee uu u saxiixay waxa uu kooxda Juventus ku sii hayn doonaa illaa sanadka 2021-ka.
Warsidaha Sky Sport Italia ayaa warinaya in heshiiska cusub ee Mandzukic uu xilli ciyaareedkii ku qaadan doono 5.5 milyan oo euro oo lagu daray gunnooyinka, waxaana mushaarkiisa lagu kordhiyey 1 milyan oo euro.
Xiddiga xulka qaranka Croatia kaasoo 33-sano jirsan doona bisha May, ayaa kooxda Juventus kaga soo biiray naadiga Atletico Madrid xagaagii 2015-kii, kaddib markii uu waqti ku soo qaatay kooxaha NK Zagreb, Dinamo Zagreb, Wolfsburg iyo Bayern Munich.
Waxa uu dhaliyey 43 gool 159 kulan oo uu u ciyaaray kooxda Bianconeri, isagoo u sameeyey 24 caawin, waxaana uu kula guuleystay saddex koobka horyaalka Serie A ee Scudetti.
Xulka Belgium oo ka soo muuqday kaalinta koowaad qiimeynta billaha xulalka adduunka ee FIFA… (Kaalintee ayay ku jiraan xulkeenna Soomaaliya iyo dalalka la jaarka ah?)
Raheem Sterling oo safamal u sameeyey 550 carruur ah oo dhigan jirtay Iskuulkiisii hore